Eray-bixinta Daabacaadda: Laga bilaabo Apex ilaa Swash iyo Gadzook inta u dhaxaysa... Wax kasta oo aad u baahan tahay inaad ka ogaato Farfaha | Martech Zone
Arbacada, Maarso 16, 2022 Arbacada, Maarso 16, 2022 Douglas Karr
Hiwaayaddeyda ugu weyn ee koray, markii aan dhib igu dhicin, waxay ahayd sawir. Xataa waxaan qaatay dhowr sano oo koorsooyin diyaarin ah intii aan ku jiray Dugsiga Sare waanan jeclaaday. Waxa laga yaabaa inay sharaxdo sababta aan inta badan u haysto maqaallo ama qoraalo ku saabsan garaafyada, Sawir-qaade, sawirro, iyo mawduucyo kale oo naqshadaysan. Maanta, waa hab-qoraalka iyo qaabaynta xarfaha.
Qoraallada qoraalka iyo daabacaadda warqadaha
Haddii aad rabto in aad dib ugu noqoto taariikhda xarfaha iyo qoraalka, tani waa filim yar oo weyn oo ku saabsan farshaxanka lumay ee Warqadaha.
Ka dib tobanaan sano oo aan ka shaqeynayay daabacaadda iyo khadka tooska ah, waxaan aaminsanahay inaan isha ku hayo naqshad weyn iyo xarfaha ayaa door cajiib ah ka ciyaara soo bandhigida astaanta, kicinta jawaabaha shucuureed. Dhab ahaan…
Ma aha oo kaliya muuqaalka qoraalka waa tixgelin muhiim ah oo loogu talagalay calaamadaha, laakiin muuqaalka xarfaha kala duwan ayaa sidoo kale saameyn maskaxeed ku yeelan kara daawadayaasha. Adiga oo bedelaya qaabka xarfaha, dooranaya far shucuur badan ama far awood leh, naqshadeeyuhu wuxuu ka dhigi karaa daawadayaasha inuu dareemo oo uga jawaabo si ka duwan xagga astaanta.
Weli shaki ma ka qabtaa awoodda xarfaha? Waxaa jira xitaa muuqaal gaar ah oo bixiya taariikhda nooca xarfaha iyo dagaalka laga heli karo YouTube. Iyo, dabcan, hubi inaad hubiso filimka Helvetica (iTune iyo Amazon):
Noocyada Farta iyo Nakhshad Qoraaleedka
Waxaa jira tafaasiil cajiib ah iyo shaqo wanaag lagu dhammeeyay qaabaynta xarfaha Qoraagayaasha. Halkan waxaa ah muuqaal yar oo wanaagsan oo ku saabsan qoraalka qoraalka… dad badan ayaan garaneynin dhammaan shaqada ku socota naqshadeynta xarfaha iyo sida ay muhiimka u tahay doorka farriimaha ay ka ciyaari karaan fariimahaaga.
Hal qoraal: Kani waa fiidiyoow weyn oo sharxaya dhammaan sifooyinka font, laakiin runtii ma jecli farta ay ku isticmaalaan fiidiyaha. Ma rabtay inaan kula wadaago mar walba! Dariiqaas marka aad rabto inaad u sharaxdo naqshadeeyahaaga inaad rabto meel bannaan inta u dhexeysa xarfaha, waad ku hadli kartaa afkooda oo waxaad ku oran kartaa, "Ma isku dayi karnaa inaan kordhinno jilitaanka?"
Qaab-qorista qoraalku waa ii xiiso. Kartida naqshadeeyayaasha si ay u horumariyaan xarfaha oo labaduba gaar ah oo xitaa awood u leh inay muujiyaan shucuur maahan wax ka yaab badan. Laakiin maxaa ka kooban warqad? Diane Kelly Nuguid Isku-dubbarid xogtan si aad u aragtid qaybaha kala duwan ee xarafka qoraalka:
Laakiin waxaa jira wax badan oo badan oo ku saabsan farshaxanka qoraalka. Halkan waxaa ah dhinac kasta iyo sifo kasta oo ay u qaabeeyeen font Qoraagayaasha.
serif - Saadaashu waxay sii fidi doontaa garaacista weyn ee dabeecadda. Sans serif macno ahaan waxaa loola jeedaa 'la'aan' Serif. Noocyada ku saleysan Serif ayaa lagu yaqaan inay dadka ka caawiyaan inay si dhakhso leh wax u akhriyaan maaddaama qaabka ereyga si fiican loo qeexay.
Shaacinta: Waxaan u isticmaalayaa xiriiriyaha ku xiran Canva ee maqaalkani.